Iindaba -I-Leeb Hardness Tester KH200
I-Leeb Hardness Tester ephathekayo inokulula kwaye imisele ngokukhawuleza ubunzima bentsimbi
Umgaqo wovavanyo lomvavanyi wobulukhuni weLeeb kukuba phantsi kwesantya esithile kunye nefuthe lomzimba elichaziweyo lonyanzelisa umphezulu wovavanyo, ukubala ixabiso lobunzima ukusuka kwinqanaba lesantya esibuhlungu kunye nokukhawulezisa isantya kumgama we-1mm womhlaba wokuvavanya.
I-Leeb Hardness Tester ephathekayo ngumboniso wombala, ujongano lweewindows, kulula ukusebenza kwaye unamandla.
Ixabiso lokulinganisa elilinganisiweyo linokuguqulwa ngokukhululekileyo kwi-rockwell, i-brinell kunye nezinye izikali zobulukhuni.
1. nge-alarm ephezulu kunye esezantsi ngokuseta kwangaphambili
2. Igobolondo lensimbi, lomelele kwaye lomelele
3. Xhasa ukutshintsha simahla kweelwimi ezi-6
Ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi kunye nokugcinwa kwamandla amakhulu kunye nokusebenza okuthembekileyo.
5. Inokuchonga ngokuzenzekelayo uhlobo lwenkqubo yophando
Ukusetyenziswa ngokubanzi.Usetyenziselwa ukuvavanywa kwicandelo lesitya soxinzelelo, amaqonga ezithuthi, ukusweleka komngundo, umsebenzi onzima, kunye noomatshini abafakiweyo kunye namalungu asisigxina. ulawulo lomgangatho kwinkqubo yemveliso ngobuninzi.
7. Iyakwazi ukubeka idatha.
Umsebenzi wobuso uhlala udibana nawo, udibana nawo, kwaye iindawo ezahlukeneyo zinefuthe elahlukileyo kwiziphumo zovavanyo lobulukhuni.
impembelelo yangoko nangoko iwela kumphezulu wesampuli iyafana naleyo yomzekelo wenqwelomoya, ke iringi yenkxaso yendalo iphela yesi sixhobo sokulinganisa i-Hardness, i-Steel Hardness Tester
Phantsi kwemeko yokusebenza ngokuchanekileyo, impembelelo yangoko nangoko iwela kumphezulu wesampuli iyafana naleyo yesampulu yendiza, ke iringi yenkxaso kwindalo iphela yanele.
Nangona kunjalo, xa i-curvature incinci ngokwaneleyo kubungakanani obuthile, ngenxa yomahluko obonakalayo kwimeko yokuqina kwe-deformation phantsi kweemeko zeenqwelomoya, isantya esibuyayo somzimba wempembelelo siya kuba sezantsi, ukuze ixabiso lokuqina kweLeezer liphantsi. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise amakhonkco amancinci xa ulinganisa iisampulu.
Kwisampulu eneradiyo encinci yokugobeka, kuyacetyiswa ukuba ukhethe umsesane we-hetero-emile ngenkxaso.
Ixesha Post: Jun-12-2020